Myanmar Tech News - Page2of 497 -
November 16, 2021 Tech News 0
နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရသည့်ညီညီအောင်ထက်နိုင်ရဲ့အစ်ကို ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်ကိုမိခင်မှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့က အစိုးရသတင်းစာထဲတွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်နှင့်ညီညီအောင်ထက်နိုင်တို့ဟာ အမွှာညီအစ်ကိုလေး များဖြစ်ပြီး ညီဖြစ်သူညီညီအောင်ထက်နိုင်ဟာလည်း နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာထဲမှာ သားဖြစ်သူမောင်ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်သည်မိဘတို့​၏ဆိုဆုံးမမှုကို နားမထောင်ဘဲ နေ့စဉ်နှင့်အမျှစိတ်ဆင်းရဲအောင်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်​နေသည့်အတွက်သားအဖြစ်မှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပါသည်ဟုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်အနေနဲ့လည်းမိခင်ဖြစ်သူအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်တဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာလေးပေါ်မှာ အခုလိုလေး စိတ်မကောင်းစွာပြောလာပါတယ်။ “သားကိုခွင့်လွှတ်ပါ…. အမေတို့စကားနားမထောင်ဘဲသားလမ်းကိုသားဆက်ရွေးခဲ့တာပါ….တောင်းပန်ပါတယ်အမေ🙏 အမေလည်းသားကြောင့်ခက်ခဲပင်ပန်းနေခဲ့ရပြီ🙏” မိခင်ကြီးအနေနဲ့လည်း ကျန်ခဲ့တဲ့ အမွှာညီအစ်ကိုလေးထဲကတစ်ယောက်ကို […]
November 15, 2021 Tech News 0
အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင်ခေါ်ကျားပေါက်ဟာ အနုပညာစွမ်းရည်ပါရမီပြည့်ဝလွန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ကိုကျားပေါက်ဖန်တီးထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာလက်ရာဟာလည်း တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများနဲ့ ဖန်တီးထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ Soft Pen လေးတွေနဲ့သာ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အနုပညာလက်ရာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်Soft Pen တစ်ချောင်းတည်းနဲ့ဖန်တီးထားစေကာမူ ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးက အဖိုးထိုက်တန်လှပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကိုကျားပေါက်ရဲ့Soft Pen လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့Doodle Art လက်ရာလေးတွေဟာဆိုရင်ကမ္ဘာကျော်တဲ့အထိကို ဖြစ်နေပါပြီ။ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ ဖန်တီးလှူဒါန်းနိုင်တဲ့Doodle Art လက်ရာလေးတွေကိုSoft […]
သရုပ်ဆောင်ယဉ်လတ်က အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှာ ရန်ကုန်စစ်ရုံးချုပ်ရှိရာ ကုန်းမြင့်သာ၌ စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အနုပညာရှင်တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့ ရုပ်သံမီဒီယာတွင် မြူးကြွလှပ ရောင်စုံည အစီအစဉ်မှာလည်း သီချင်းသီဆိုခဲ့သူဖြစ်ပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို သံစဉ်အလိုက် မှန်ကန်အောင် မဆိုနိုင်လို့ ​ဝေဖန်ခံ​နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲ […]
ဦးကျော်သက်လင်းဟာMRTVရုပ်သံဌာနကနေ စောဦးစွာCDM ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။CDM ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ခံယူချက်ပြင်းထန်စွာနှင့်တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ဦးကျော်သက်လင်းဟာ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာဆိုရင်ဦးကျော်သက်လင်းဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ ခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်နေရင်း ပြောင်းလဲသွားတဲ့မြို့ပြက မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကြောင်းကို အခုလိုလေးရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “သတ္တဝါတိုင်းဟာဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့အကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးလာရင်… ဥပမာ-ခြင်လေးယင်လေးတကောင်ကို လွယ်လွယ်ဖမ်းလို့သတ်လို့မရပါဘူး။ ရိုက်ဖို့ချိန်လိုက်တာနဲ့ပျံသန်းလွတ်မြောက်သွားတာများတာပါပဲ။ ကျနော်တို့လည်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တစ်နေရာကိုစွန့်ခွါရပါတယ်။ စွန့်ချင်ခွါချင်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလည်း။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကအန္တရာယ်ကြောင့်စွန့်ခွာရတဲ့အခါမြို့ပြကလူတွေကလည်းသူတို့ရပ်တည်မှုကိုထိခိုက်လာမှာကြောင့်ကျနော့်ကိုပြန်ခွာလာကြတယ်။ ကျနော်ခန္ဓာကသာသူတို့နားကခွာခဲ့ရပေမယ့်သူတို့ကစိတ်ရောကိုယ်ပါစွန့်ပစ်ဖယ်ခွာသွားကြတဲ့အခါ…. တောထဲမှာပဲ ချေးမဖောက်အကြေးခွံမခွာပဲ […]
မြနှင်းရည်လွင်က တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပြည်သူနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်တာကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးကင်းရာကို ရှောင်တိမ်းပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ ရောက်ရာနေရာကနေတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မြနှင်းရည်လွင်က […]
အားလုံးချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေက ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ခြေ ၁၅၀ စာအတွက် မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခြေ ၁၅၀ စာအတွက် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် အလှူငွေ ၅ ထောင်ကျပ်၊အခြေ ခံစားသောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ဆန် ၊ကော်ဖီမစ်၊အားဖြည့် အချိုရည်များကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ […]
ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ(၁၄)ရက်နေ့က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်ကို စစ်ကောင်စီမှ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။သူမ ဟာ ပြည်သူလူထုနှင့် တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သူမရဲ့မိသားစုဝင်များနှင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ထွက်ခွာမည့် မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA နှင့်လိုက်ပါစီးနင်းရန် […]
ပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်များ ၊ သဘာဝဆန်လွန်းတဲ့ အနုပညာ နဲ့ နုပျိုလွန်းတဲ့ ရုပ်ရည်အသွင်အပြင် ကြောင့် ပရိတ်သတ်ရင်ထဲ ယနေ့တိုင် နေရာယူထားတဲ့ အမျိုးသားအနုပညာရှင်တစ်ဦးလို့ဆိုလာရင်တော့ ပြည်သူ့မင်းသား မင်းမော်ကွန်းလို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အာဏာထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ ပြည်သူများနှင့်တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လွတ်မြောက်နယ်မြေအထိ သွားရောက်နေထိုင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ […]
November 14, 2021 Tech News 0
Myanmar Idol season (4)ရဲ့ Top(3) finalists တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားလေး အဆိုတော် Benjamin Sum ကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးတဲ့အပြင် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ လှူဒါန်းပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လည်း ဂီတနယ်ပယ်မှာ ထူးချွန်နေတဲ့ Benjamin Sum […]
သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုးတို့မိသားစုရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူ
ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဥ်ပြုဆိုသလို အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ လို့ဆိုရလောက်အောင် လှူဒါန်းလေ့ရှိသူက အားလုံးချစ်ခင်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုးရဲ့ မိခင် အန်တီဆွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးဟာ အနုပညာခရီးလမ်းကြောင်းမှာလည်း နေရာတစ်ခုရရှိထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုးဟာ အခုချိန်မှာတော့ ချစ်ဇနီးလေး ခင်လွှမ်းနဲ့အတူ သာယာချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်ထားနိုင်သူတစ်ဦးလည်း […]